Imba>Our Services>Freight Yegungwa>FCL Shipment
Panguva imwecheteyo, yakasainwa neverengeki vekirasi yekutanga sevhisi, SHL inovimbisa kutakurwa kwezvinhu zvakanaka, zvirinani zvemhando yebasa uye sarudzo zhinji dzerwendo. Kunze kwezvo, isu tine hukama hwakanaka hwekubatana pamwe nemafambisirwo mazhinji ematanho makuru ekufambisa liner nevashandisi vedu vekunze vanobva makondinendi akasiyana.
SHL kutumira kunze bhizinesi kunosanganisira kubhuka nzvimbo, tsika kuzivisa, kuongorora, kuchengetedza, kutakura zvinhu, kutakura kujekesa kunzvimbo yekuenda, kuendesa uye kune mamwe mabasa ane hukama nehumwe. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, tinopa kunze kwenyika chitatu-nzvimbo kuchinjana, chechitatu-nzvimbo kutumira uye mamwe masevhisi.
Sohologistics mukana mitsara:
Mitsara yegungwa yakatsvuka
Pakati uye South America mitsara
Southeast Asia mitsara
iyo US neCanada mitsara
Sohologistics yakachengeta kushandira pamwe kwepedyo neYML, EMC, COSCO, CHINA SHIPPING, CMA, HAPAG, OOCL, K-mutsara, MSK, APL, avo vanozivikanwa kutumira liners, uye vakasaina zvibvumirano nemutengo wakanaka uye nekuvimbisa nzvimbo yekutumira.
Iine makore makumi maviri ehunyanzvi mukushanda kwekutumira uye kutumira kunze kwenyika nengarava, SHL inyanzvi mune zvese zvikamu zvebhizinesi kushanda uye kubatsira vatengi kubata nematambudziko munguva uye zvinobudirira.
Yazadzikiswa neFOB / CIF / DDU / DDP / EXW incoterms yevatengi bhizinesi yedu zvinodiwa, yedu yekune imwe nyika vamiririri kana vezvemukati timu timu inopawo: kuunganidzira Kubhadhara zvinhu pakutakura, kutakura mari, kuunganidza mubhadharo, mabasa ekufambisa, fumigation, kurongedza, kuchinja, tsika clearance, transshipment, warehousing, kugovera uye rimwe bhizinesi.
Pamusoro pekupa mabasa ekunze uye kutumira kunze kwenyika mumaguta ari kumahombekombe eShanghai, Tianjin, Dalian, Qingdao, Lianyungang, Guangzhou, Dongguan, Shenzhen, Xiamen, Sohologistics inopa kunze uye kutumira kunze kwePSL neOOG munzvimbo dziri pazasi madoko parutivi rweYangtze.